Video Archives - Page2of 14 - Fonij Korea
दुई कोरियाको युद्ध सन् १९५० जुन २५मा सुरु भएर जुलाई २७, १९५३ मा सकिएको थियो । तीन बर्षको युद्धले दक्षिण कोरियाकाे दुई लाख भन्दा बढि र उत्तर कोरिया तर्फ तीन लाख भन्दा बढि मानिसले ज्यान गुमाए । अमिरिका, चीन, बेलायत लगाएत धेरै देशका सैनिकहरु पनि लाखौ संख्यामा मारिए । लाखौ मानिसको घरबार गुम्यो । लाखौकै आफन्त अझै भेटिएका छैनन् । यस्तो ह्रृदय बिदारक युद्धमा के कस्ता सैनिक हतियार प्रयोग भएकाफुर्सदमा
यस हप्ता गोकुल थोकर र सिमा लामाले आफ्नो ब्लग cool gafgaaf मा सुवन देखि बुसानको छेउमै रहेको गुपो स्टेशनसम्मको रेल यात्रा देखाएका छन् । बस्नका लागि सिट नपाए पनि उनीहरुले गरेको रेलयात्रा रमाइलो छ । ठूला ठूला खेतका फाँट र साना साना पहाड रेलको झ्यालबाट देखिदा नेपालको अन्न भन्डार भनिने तराई क्षेत्रको याद दिलाउँछ । झन्डै तीन सय किलो मिटर लामो रेल यात्रा भरि नै नेपालको जस्तै भुभाग देखिन्छन्फुर्सदमा
तामाङ प्रचिन बाचा टुङ्ना र डम्फु । आधुनिकताको माझमा हराउँदै छ । बिलाउँदै छ । संस्कृति र संस्कार बचाउने हो भने आफ्नो कला संस्कृतिको संरक्षण बेलैमा गर्नु पर्छ । यस पटक गोकुल थोकर र सिमा लामाको ‘cool gafgaaf’ ब्गलमा डम्फु र टुङ्नाको धुन सुन्न सकिनेछ । बिदेशमा बस्ने नेपाली अरु दिन कामले थिचिए पनि फुर्सतका समयमा रमाइलो गर्छन् । साथीभाइ जमघट भयो । नाच्यो, गायो रमाइलो गर्यो । दक्षिण कोरियाकोफुर्सदमा
Video, कोरिया Comments are Off
तँपाई दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ ? भने कतिको घुम्नु हुन्छ ? अनि कोरियाको सबै भन्दा ठूलो नेसनल म्युजियम अफ कोरियाकाे बारेमा थाहा छ ? थाहा छैन भने याे भिडियाे हर्नुहाेस् । काेरियाका बिभिन्न ठाउँमा घुम्ने दुई जना पत्रकार छन् । यस पटक गोकुल थोकर र सिमा लामाले कोरियाको ठूलो मानिने नसनल म्युजियम घुमेका छन् । दुबै जनाले त्यहाँका कलाकृति र रमाइला पक्षहरु देखाउने प्रयास गरेका छन् । फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने घुम्नुहोस् ।फुर्सदमा
दक्षिण कोरियामा रहेका पत्रकारद्धय सिमा लामा र गोकुल थोकरले नियमित रुपमा ब्लगीङ सुरु गरेका छन् । कुल गफगाफ नाम रहेको ब्लगमा दक्षिण कोरिया रमाइलो ठाउँ, कोरियन कला संस्कृति र दक्षिण कोरियामा हरेका नेपालीको जीवनशैली देख्न सकिनेछ । दुबै जना नेपालमा टेलीभिजन पत्रकारितामा लामो समय काम गरेका पत्रकार हुन् । ‘हामीले जानेको काम फुर्सत हुँदा प्रयोग गरेर ब्लग बनाउने प्रसास गरेका छौ । विश्व भरि रहनु भएका नेपालीका लागि दक्षिण कोरियाकोफुर्सदमा
कोरियालाई कर्म थलो बनाएका प्रदेशी गायक तथा सर्जक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल,कोरिया शाखाको सल्लाहकार देबिन्द्र काउचा मगरले फेरी एउटा विशुद्ध मौलिक झ्याउरे गीत ‘भुरूरू उड्ने चरी’नामक निकै मिठो गीत लिएर आएका छन। गीत सृजनामा अब्बल मानिने साथै रहस्यमय स्वरका जादु भएका गायक काउचाको यस भन्दा अगाडी आफ्नै स्वरमा ‘किन खोज्छ्यौ जोरी मायालु’नामक पन्चे बाजा,बेशी तिर झर दोहोरी गीत,बचनले रेट्ने मायालाई,बैश छदै सालैजो,यस्तै यस्तै दर्जनौ गीतहरू बजारमा आईसकेका छन।कोरियाफुर्सदमा
द बिस्पा र इन्टेस ईल्डको निर्माणमा गायिका रेश्मा सुनुवारको गीत “उल्लु” को म्युजिक भिडियो सार्वजिक भएको छ । बिभोर पोख्रेलको निर्देशन रहेको भिडियोमा कोरियोग्राफी र लिड मेल मोडलमा अनुराग ठकुरी रहेका छन्। अनुराग संगै भिडियोमा फिमेल मोडलमा स्वीकृति प्याकुरेल , समिता ओझा र डिचेन लामालाई फिचर गरिएको छ। कोरियोग्राफीमा नयाँ कन्सेप क्यामेरासँगको केमेष्ट्री मिलाउन निकै गाह्रो भएको बताउदै कोरिग्राफ़र अनुराग ठकुरीले भिडियोको टेष्ट फरक पार्नु नै मुख्य लक्ष रहेको बताए । फुर्सदमा
पर्बत जिल्ला जलजला गाउँपालिका ५ स्थित लोप्रे गाउँको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको भ्युजिक भिडियो सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।लोप्रे गाउँको प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कार, संस्कृति, धर्म तथा परम्परालाई समावेश गरेर छोरी छोरीको मनोभावनामा आधारीत रहेर न्यू सृष्टि युवा क्लवले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियोलाई हाईलाईट्स नेपालको युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेकाे हो । भिडीयोको बिजया दशमीका दिन जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिमा गर्बुजा पुनले बिमोचन गरेका थिए । देवेन्द्र पुनको रचना, एल.बिफुर्सदमा